Kọwa Daniel 2:44 – willnye ga eketa n’alaeze Chineke? – Daniel 12:1-3 El tiempo del fin y de la revelación del juicio de Dios – Jesús [Josué] tenía cabello corto
Kọwa Daniel 2:44 – willnye ga eketa n’alaeze Chineke?
Ndi di ume-ala ala ga-eketa ala-eze nke Chineke, ndị anyaukwu agaghị eketa ya, ya bụ na ndị dị mpako agaghị eketa alaeze ahụ n’aka Chineke.
Ndi npako agaghị eketa ala-eze Chineke n’ihi na ha na-achọ ihe onwunwe nke ndị ọzọ!
Ha anaghị ekwenye na ihe dị mkpa, ha achọghị iko gafere, ha chọrọ iko ọla edo, ọ bụ ezie na inweta ya na-egosi nrigbu nke ndị ọzọ!
Ha anaghị edozi maka mgbanaka ọla kọpa, ha chọrọ mgbanaka nwere diamonds, ọ bụ ezie na inweta ya gụnyere nrigbu nke ọtụtụ mmadụ,
Ha adabaghị n’ihe dị mkpa, ha chọrọ okomoko, agbanyeghị na inweta ụdị ihe ụtọ ndị a na-egosi oke mbibi nke ala.
(Ndi adighi agha agha doro anya, ha bu ihe efu, dika ndi ndi ozo jiri ndi ozo wulite ulo elu Bebel ..)
Nkpughe 11:15 mmụọ ozi nke asaa gụrụ opi, nnukwu olu dara n’eluigwe, ndị na-asị: Ala-eze nke ụwa abụwo nke Onyenwe anyị na nke Kraịst ya; Ọ ga-achịkwa ruo mgbe nile ebighị ebi.
Ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ, bụ́ ndị nọdụrụ n’ihu Chineke n’ocheeze ha wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, kpọọ isiala nye Chineke,
17 na-asị: Anyị na-ekele gị, Onye-nwe Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, onye dị adị na onye ị bụ, na onye ga-abịa, n’ihi na i werewo ike gị dị ukwuu wee chịa.
18 Ndi mba ọzọ were iwe, iwe-Gi abiawo kwa, ọ bu kwa oge ikpé ndi nwuru anwu ikpe, na inyeghachi ndi oru gi ndi amụma, ndi nso ya na ndi na-atu egwu aha gi, umu aka na ndi di uku. na imebi ndi nile n destroybibi uwa.
Nkpughe 11:19 Ma ulo uku Chineke nke emegheworo n’elu igwe, ewe hu igbe ọgbugba ndu ya n’ulo uku ahu. Ma àmụmà, olu, égbè eluigwe, ala ọma jijiji na nnukwu akụ mmiri.
Kedụ ka ndụ ndị mmadụ ketara alaeze Chineke ga-adị?
Nwoke ọ bula g’eme ka nwayi bu nwanyi, dika Chineke nyere n’iwu, n’idi-ọcha ya na nwa agbọghọ.
Eachmụ nwanyị ọ bụla ga-enwe naanị otu nwoke, a gaghị enwe ebe ụmụ nwoke hụrụ ha n’anya ma ọ bụ ndị hụrụ ụmụ nwanyị n’anya, a gaghị enwe ebe ha na-akwa iko.
Andmụ nwoke na ụmụ nwanyị ga na-efe nanị otu Chineke: Jehova, ha agaghị elele ihe oyiyi, ihe osise, ihe oyiyi, ma ọ bụ ihe ọ bụla oge iji duzie ekpere ha n’ihe ndị ahụ. Ha agaghị ekwuwa aha n’ekpere ha, ma ọ bụ nke mmadụ, ma ọ bụ nke mmụọ ozi, belụsọ aha Chineke: Jehova.
– Ma Mohammed na ụmụ agbọghọ iri isii na asaa ndị na-ekwe nkwa okpukpe ha na Bahira jikọrọ?
Muhammad na ụmụ agbọghọ iri asaa na isii ekwekọghị na ndụ n’alaeze Jehova,
O buru na I juo m ka m họrọ n’etiti:
(A) Bụrụ ịbụ eze nke akụ n ’ụlọ na ị nwee ike iso onye akwụna ahụ m họọrọ n’ụbọchị niile.
(B) Bụrụ onye nwoke m hụrụ n’anya nke nwanyị kwesịrị ntụkwasị obi na onye hụrụ naanị nwanyị kwesịrị ntụkwasị obi n’anya, nwunye m, dị ka Chineke nyere n’iwu.
Ahọrọ m leta nke ikpeazụ, leta “B”: nwunye.
Ọ bụ ya mere Babilọn na okpukperechi ya na nwanyị akwụna nwere ike ịbanye na hel, ya na ndị amụma ụgha niile na ndị mmụọ ozi nupụrụ isi nke jere ozi adịghị ọcha ya.
Ole ndị bụ ndị na-agaghị eketa ala-eze Chineke?
Ndi n’adighi ndu ndu ndi akowara n’elu edozi, kama ha kariri ime ihe akowara na 1 Ndi Korint 6: 9-10 dika omume nke ndi gagh eketa ala eze Chineke. kwuru n’ụzọ ọzọ: ndị mpako, ha hụrụ ndị mmadụ n’anya na-ekwutọ ndị ọzọ na-anabataghị ha dịka enyi, ma ọ bụ di na nwunye, ma ọ bụ ghara ịnabata okpukpere chi ha dị ka nke ha.
Ekwekwala m ihe ọjọọ, eziokwu ahụ m kwuru 1 Ndị Kọrịnt 6: 9-10 dịka ederede sitere na Bible nke dabara n’ụzọ zuru oke na ọkwa m ebe a, apụtaghị na m kwere na ọdịnaya niile nke Akwụkwọ Nsọ, abụghị m onye Onye na-ekwusa akwụkwọ nsọ, Akwụkwọ Nsọ ewerela ụfọdụ akụkụ nke Akwụkwọ Eziokwu iji mee onwe ya ka ọ bụrụ Akwụkwọ Nsọ, mana dịka m na-egosi ndị maara ihe na blọgụ m: bestiadn.com, anụ ndị ahụ ejirila ederede dị nsọ wee tụgharịa. ọtụtụ n’ime ha enweghị akwụkwọ, yabụ ha mere ha Akwụkwọ Nsọ ha: akwụkwọ nke imegiderịta, akwụkwọ dị iche karịa akwụkwọ nke Eziokwu na Akwụkwọ Eziokwu bụ akwụkwọ enweghị mgbagha, onye dere akwụkwọ nke eziokwu bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi , ma ọ bụ ọtụtụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi bụ ndị dere Akwụkwọ nke eziokwu, mana mgbe ndị akaebe ụgha gbagburu ndị akaebe kwesịrị ntụkwasị obi ma were akwụkwọ ha, gịnị ka i chere ndị akaebe ụgha ahụ mere n’ozi nke ndị akaebe kwesịrị ntụkwasị obi dere?, Achọghị m ịza ndị m ajụjụ ahụ, ha abụghị ndị nzuzu.
Kọwa Daniel 2:44 - willnye ga eketa n’alaeze Chineke?
Previous Post ການຕີຄວາມ ໝາຍ ຂອງດານີເອນ 2:44 – ໃຜຈະເປັນຜູ້ສືບທອດໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ?
Next Post Tafsiran Daniel 2:44 – Siapakah yang akan mewarisi di dalam kerajaan Allah?